Japan Ratidza Commissioner Kupa OLED Apple Watch Series 5 | Ndinobva mac
Nguva dzese nepfungwa yakatariswa pama microLED skrini patinotaura nezveApple Watch yenguva yemberi, ikozvino zvinoita sekunge iwo OLED skrini dzeApple watches dzichava nemugovera mutsva, Japan Ratidza. Apple inotevera kutsvaga dzimwe nzira dzeSamung Ratidza uye LG kune avo maOLED skrini, zvakanyanya zvekuti matanho akakosha anotogamuchirwa muR & D pamwe nekugadzirwa kwenzvimbo dzekutsvagisa nekusimudzira muTaiwan, pakati pekumwe kudyara.
Chokwadi ndechekuti chizvarwa chitsva cheaApple Watch Series 5 chichauya gore rino hachiite senge chine shanduko dzakawandisa kupfuura vagadziri vezvinhu uye nhau musoftware dzavanogona kuwedzera kubva kuCupertino. Ichokwadi kuti kwayedza kutora mhedziso asi shanduko chete dzinogona kuwedzerwa ndedzekuti aya maOLED anobva kuJapan Display ari yakati mutete uye tendera kwakakura kuchinjika saka ivo vaigona kutenderedza makona eiyo modhi zvishoma zvishoma.
OLED iri kutora pamusoro paApple
Uye ndizvo izvozvo Imwe yazvino kuburitsa inotaura nezvekuuya kwe2020 kwevatatu iPhone mamodheru ane OLED skrini uye ikozvino zvakakosha kuwana vatengesi vazhinji sezvinobvira pane izvi, saka Apple iri kutarisa pakati pevanogadzira aya mapaneru. Reuters nhasi yaparura uyu mushumo iyo inotaura chaizvo nezvekuuya kweJapan Display kune kugadzirwa kwemasikirini eApple.
Pazviri kuitika izvi, kutsvagisa kuri kuenderera pamwe ne microLED tekinoroji iyo yaizotsiva OLED skrini. Iyi microLED tekinoroji inogoverana neazvino inoratidza iwo chaiwo mukururama kwemavara, mutsauko uye nekukurumidza kupindura nguva, vatema vechokwadi. Asi mukufarira kwayo, MicroLed tekinoroji inobvumidza akaonda mashoma masikirini kupfuura maOLED akatetepa, anopenya zvakanyanya pakuenzanisa uye kupfuura zvese, anowedzera simba simba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Japan Ratidza mutoro wekupa OLED skrini yeApple Watch Series 5
Podcast 10x25: Imwe yelime uye imwe yejecha
RapidWeaver 8 webhu peji mupepeti inowoneka pane Mac App Store ine kusimudzira